SPC Yemamiriro ekunze Floor Extrusion Line - China SPC Yemamiriro ekunze Extrusion Line Mutengesi, Fekitori -Jwell
SPC pasi extrude nePV'S base zvinhu zvinopinda nemana roll roll calender michina, uye PVC color firimu + PVC kupfeka dura + PVC hwaro hwembada, unotevera kudhinda uye unama mafirimu aya kuti ave zvigadzirwa, yakapusa maitiro, zadzisa paste iyo inoenderana nekupisa, ipapo haisi glue.
SPC kwezvakatipoteredza pasi extrusion mutsara mukana
● Isina mvura uye isina hunyoro, inogona kugadzirisa zvinetswa zvematanda zvigadzirwa senge zviri nyore kuora uye kuwedzeredzwa deformation mushure mekunwisa mvura kana kukanganiswa nenzvimbo nyoro. Naizvozvo, pasi pekambani yedu WPC inogona kushandiswa mune ino nharaunda nharaunda iyo yechivanhu huni chigadzirwa chisingakwanise.
● Rakajeka, mazhinji mavara anosarudzika.Pane echisikigo huni hwekunzwa uye huni dhizaini, uye zvakare iwe unogona kusarudza iyo kara iwe yaunoda maererano nehunhu hwako.
● Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kusasvibisa, kusasviba, kudzokororazve. Zvigadzirwa zvacho hazvina benzene uye formaldehyde, chigadzirwa chemagariro, kugadziriswazve kunoderedza mashandisirwo ehuni, uye izvo zvinokodzera kusimudzira nekusimba kwemutemo wenyika uye zvinobatsirawo nzanga.
● Kuchengetedza moto zvakanaka. inogona kumisa moto zvine hunyanzvi, chiyero chemoto chinosvika padanho B1, kana zvigadzirwa zvekubata moto, moto uchadzima ipapo ipapo, uye usaburitse chero gasi rine chepfu.
● Nyore yekumisikidza, inokodzera wok, nzira dziri nyore dzekuvaka, chengetedza yakaiswa nguva uye mubhadharo.
● Kwete kutsemuka, kwete kuwedzera, kwete kunze kwechimiro, usagadzirise nekuchengetedza, zviri nyore kuchenesa, chengetedza mushure mekugadzirisa uye mushure mekubhadhara mari.